ကချင်နုထွားကြီးရေ.. ဒီမှာလဲ မေမြို့သားဟဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကချင်နုထွားကြီးရေ.. ဒီမှာလဲ မေမြို့သားဟဲ့
ကချင်နုထွားကြီးရေ.. ဒီမှာလဲ မေမြို့သားဟဲ့
Posted by စဆရ ႀကီး on Aug 22, 2014 in My Dear Diary | 18 comments
မေမြို့သားဆိုတာ ဘာများကြောက်စရာကောင်းလဲလို့ ဖတ်လိုက်တော့ တစ်ချို့နေရာတွေ လွဲနေတယ်ထင်တယ်.. တစ်ကယ်တန်း မန္တလေးမှာ နာမည်ကြီးတာ ကိုယ်တို့ခေတ်အခါတုန်းကတော့ တစ်မျိုးပေါ့လေ.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ကျော်ကျော်က ပြောပါတယ်..
ပြောရမယ်ဆို နည်းနည်းတော့ ရှည်လမျောကြီးဖြစ်နေမပေါ့ကွယ်.. ဖတ်ရင်း ဘတ်လဘိုင်လိုက်သွားရင်တော့ မသိဘူးပေါ့
ဆိုတော့ကာ.. ကိုယ်တို့မှီလိုက်တဲ့ ကိုယ်တို့သိလိုက်တဲ့ ခေတ်တုန်းကပေါ့
အဲ့ဒီတုန်းက (ခုတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်ခဲ့တုန်းကလို) မေမြို့သားတွေက ဖင်ကြားမှာ အင်ဂျင်တုန်းကြီးတွေ မညှပ်နိုင်သေးတော့ ပိုက်ဆံအနည်းငယ်တတ်နိုင်သူများက ဖီးဆင့်ဘီးကို နောက်ကယ်ရီယာဖြုတ်ပြီး နင်းတာကကို စမတ်ဂွမ်နေတာလား… မတတ်နိုင်သူများကတော့ ဆိတ်ငါးကောင်ဘီးကို နောက်ကယ်ရီယာခုံဖြုတ်၊ လူတင်ချင်တင်လို့ရအောင်ရယ်၊ အရေးကြုံလာရင် ဆော်ပလော်တီးရအောင်ရယ် သစ်သားဘားတန်းကို စက်ဘီးထိုင်ခုံတန်းမှာ ထိုးရင်း မေမြို့တစ်ခွင်ပါတ်နေရတာ။ စာမေးပွဲနောက်ဆုံးရက်တွေမှာတော့ ချိန်းဖုံးကြားမှာ ချိန်းကြိုးတွေပါ ပါတာပေါ့နော..
ဆိုတော့… အဲ့ဒီကာလတုန်းများကပေါ့.. မေမြို့သားတွေမှာ တတ်နိုင်လွန်းပါတယ်ဆိုမှ စူပါကပ်လေးတွေပေါ့၊ ကျောက်စိမ်းလေးများ စီးလိုက်လို့ကတော့ ဆော်ကြည်ဘဲပဲ။ ဇွတ်အတင်း မရမက ပြောရမယ်ဆိုရင်များ ကိုယ်တို့မြို့မှာ ကိုယ်တို့မြို့သူ ထ(၂)က ဆရာမ မစန္ဒာရဲ့ ယောကျာ်း နိုင်ငံကျော် (ထိုခေတ်က နာမည်အတော်ကြီး) အငဲတောင် မေမြို့ရောက်ရင် သူ့ဆံပင်ဖားလျားကြီး၊ ဂလန်ဂလားကြီးနဲ့ လေးဖြူတို့ ဟာလေကြီးတွေစီးပြီး ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံနေတာမှမထောက် မြို့အနှံ့ ဆူပါကပ်ဆိုင်ကယ်အပုလေးနဲ့ လျှောက်သွားနေလိုက်တာမှကွာ.. သိပ်ပြီး Rocker ကြီးပီသလွန်းလို့ သူများတွေ လေးဖြူကို အားကျနေရာကနေ အငဲကို အားကျလို့တဲ့ ဆူပါကပ်ပဲ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်စီးကြတယ်။ (အိတ်ဇောပိုက်တောင် ဖြုတ်လိုက်သေး.. အဲ့လို)
နောက်တစ်ခုကကွာ မေမြို့သားတွေမို့ ကြုံတုန်းလေး ပြန်အလွမ်းသင့်လိုက်ချင်ပါသေးတယ်.. မေခလမ်းထဲမှာကွာ လမ်းမဆုံးခင်ထောင့်ချိုးကွေ့လေး ဘယ်ဘက်ကတိုက်လေးက သီချင်း အနည်းငယ်ဆိုဖူးတဲ့၊ ခုဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့၊ ဒို့များခေတ်တုန်းက ထွဏ်းထွဏ်းတို့နဲ့ ခေတ်ပြိုင် ခရစ္စတိုဖာ ဆိုတာ ရှိဖူးတယ်ကွ၊ တစ်ချို့များတော့ သိမယ်ထင်တယ်။ သူတို့ဆို သိပ်ပြီး Rocker ပီသကြတာ။ အဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက် အဲ့ဒီတုန်းက ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ ရှိကြတယ်.. ညီတို့လို ကချင်နုထွားတွေရော၊ ကချင်မ နုထွားလေးတွေရောပေါ့။ ကိုယ်လဲ အဲ့ဒီလမ်းမှာ နေခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာ PM ကနေ တစ်ခါပြောခဲ့ဖူးပါတယ်..။ လိုရင်းကို ပြောမယ်ပေါ့ကွာ.. အဲ့ဒီခရစ္စတိုဖာတို့ မိသားစုက ROCK ဂီတကို သိပ်ပြီး မြတ်နိုးလွန်းတာရယ်၊ ကိုယ်နေဖူးတဲ့ အိမ်နောက်ဖေးကပ်လျက်က ကိုအငဲကို သိပ်အားကျတာရယ်ကြောင့် ဆူပါကပ်ကြီးပဲ ၅ စီးတောင် အိမ်သုံးအနေနဲ့ ထားထားသတဲ့။ ဖြစ်ပုံများ အဲ့လို။
ကြုံတုန်းလေး ပြောပြချင်လာပြန်ရော.. ပြောရရင် ကိုအငဲတို့ခြံနောက်ဘက်မှာ သင်္ဘောသီးပင်တွေ စိုက်ထားသကွ၊ အပင်တွေကလဲ အတော်လေးရှည်တယ်ပေါ့.. ဒီတော့ ခြံစည်းရိုး ကျော်နေတယ်ပေါ့ကွာ.. ဆိုတော့ နေ့တိုင်း မြင်နေရတယ်ပေါ့။ ဖင်ချင်းပေါက်အိမ်တွေဆိုတော့။ တစ်နေ့တော့ ကိုယ်တို့တွေ (ဆိုတော့ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့) အကြံရလာပါရော။ ရဆို အဲ့ဒီတုန်းက လူငယ်တွေဘဝကိုးကွ။ သင်္ဘောသီးတွေခူးပြီး သုတ်စားကြမယ်ပေါ့။ ပြောရမယ်ဆို အဒေါ်ကို ရှင်မဿ ဲကို လိုက်ပို့ပြီးတော့ တစ်ညနေလုံးအားနေတာလဲပါတာပေါ့။ ကိုယ်က သူ့ကို ထမ်းပြီးတော့တင်၊ သူမကလဲ တစ်လုံးလားဖြုတ်ရသေးတယ်၊ ဆရာမ မစန္ဒာက မြင်သွားပြီးအော်တာနဲ့ ပြေးလိုက်ရတာ၊ သူမလက်ထဲမှာ သင်္ဘောသီးစိမ်းတစ်လုံးနှင့်။
အဲ့ဒီတုန်းက စားလိုက်ရတဲ့ သင်္ဘောသီးသုတ်လေးက ခုထိတိုင် မှတ်မိနေတုန်းပဲ….။
ဪ.. သူမလား? မေးမနေပါနဲ့တော့ကွယ်… ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူမကို မာတာမိခင် ဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့။ ပြန်ရောက်တုန်းတောင် မဆုံဖြစ်လိုက်ကြဘူး။ အဲ့လို။
ဪ… မှတ်မိပြီ Rocker ကြီးတွေဆိုတဲ့အကြောင်း။
ဆိုတော့ ကိုယ်တို့တွေ ဂေါ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပေါ့နော်.. ဂျင်းဘောင်းဘီဖင်ကျပ်၊ အောက်မှာခေါင်းလောင်းဖြစ်ချင်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဒဲ့ပွတွေပေါ့နော်၊ ဆံပင်တွေကတော့ လူတိုင်း အရှည်နီးပါးထားကြတယ်.. ရာသီဥတုကလဲကောင်းတာကိုး။
ပြောရရင် ကိုယ့်ညီရာ.. အဲ့ဒီတုန်းက မေမြို့ကန်တော်ကြီးဆိုတာ သစ်တောဌာနကပိုင်တာကွ.. ဘာမှ ပြင်ဆင်မှုမရှ်ိ၊ သဘာဝအတိုင်းထားတာ.. ညီတို့ခုဝင်နေရတဲ့ ဆင်လမ်းရွာနားကနေ ဝင်ရတာမဟုတ်ဘူး… ကန်တော်လေးကနေတက်လာတာနဲ့ ကန်တော်ကြီးဆိုတာကို တန်းတန်းမတ်မတ်ဝင်ရတာ.. ဝင်ခက ကလေး ၁၀၊ လူကြီးကြီး မကြီးကြီး ၁၅ ကျပ်ပေါ့။ ဝင်လိုက်တာနဲ့ ခု ကိုယ့်ညီတို့မြင်နေရတဲ့ ငှက်ပြခန်းဆိုလားဆိုတာ နယ်နမိတ်အဆုံးပေါ့.. အဲ့ဒီနောက်မှာ တောအုပ်ကြီး ဟီးနေတာပဲ… ကန်တော်ကြီးနဲ့၊ ကန်တော်လေး ဘောင်ပိတ်ထားတဲ့အခြမ်းက ဝင်မယ်ဆိုရင် ညာဘက်ခြမ်းမှာ ကန့်သတ်နယ်မြေ မဝင်ရ ဘာဖြစ်သည် ညာဖြစ်သည်တောင် ပါသေး.. ဟေးဟေး
မန်းသားတွေက အဲ့ဒီတုန်းက ဒိုတွေ ဖင်ကြားညှပ်တယ်ပေါ့ကွာ၊ ဒိုခရမ်းတွေပေါ့
ဒို့မေမြို့သားတွေကလဲ ဖင်ကြားမှာ ဖီးဆင့်တို့ ဆိတ်ငါးကောင်တို့နဲ့ပေါ့
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တို့က စည်းထားပါတယ်။ ဆံပင်ရှည် ဂျင်းဘောင်းဘီကြီးတွေနဲ့ စက်ဘီးကိုနင်းပြီး မန္တလေးကို မဆင်းကြဘူး၊(အဲ့လို စည်းကမ်းရှိတာ) သူတို့မန်းသားတွေသာ ကိုယ်တို့ဆီ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်လာကြတာလား။ ဆိုတော့ကာ ကန်တော်ကြီးထဲမှာ ကဲကြတယ်ပေါ့။ တစ်ချို့ကလဲ ကန်တော်ကြီးထဲက တောအုပ်တွေကို သဘောကျလို့ သူတို့စကီလေးတွေနဲ့ လာကြတယ်ပေါ့။ ကိုယ်တို့က မြို့ခံတွေဆိုတော့ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့တွေကတော့ ကိုယ်တို့မြို့သားတွေကိုတွေ့ရင် နှိမ်ချင်ကြသကွ။ လူငယ်သဘာဝ သွေးဆူနေတာလဲ ပါမှာပေါ့။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အဖွဲ့တောင့်တယ်လို့ထင်တာလဲပါမယ်ထင်ပါတယ်။ ကန်တော်ကြီးထဲမှာ ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ် မကြာခဏဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ဖြစ်ပြီဆို ကိုယ်တို့ဘက်က တစ်ယောက်ထဲချည်းပဲ။ ချယ်ရီဓါတ်ပုံတိုက်က လူတွေဆို သိကြပါတယ်။ ခုထိ သူတို့က ရိုက်ကူးခွင့်ရထားတုန်း။ ကိုယ်တို့ကပြောရရင်ကွာ ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ်နေကြတာလား။ ဥပမာ ရကက ၅ မှာ ရကက ၁ ကလူတွေ ရေမြွေလို နေရသလို ရကက ရ ကို ရကက ၃ ကလူတွေသွားရင်လဲ ကုပ်ကုပ်လေး နေကြရတယ်။ သွားတော့ မစလေနဲ့၊ အများနဲ့ တစ်ယောက် ပထမ ခံချင်ခံလိုက်ရမယ်၊ စုရပ်က TEA ဆိုင်ကို အဖော်ပါတဲ့ တစ်ယောက်က သွားသတင်းပေးလိုက်တာနဲ့ အဲ့ဒီအဖွဲ့ ထွက်ပေါက်မရှိ ဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်။
အဲ့လိုပေါ့ကွယ်.. လူငယ်သဘာဝ ငြိကြတယ်ပေါ့၊ ငြိကြတာနဲ့ မန်းသားတွေ ကန်တော်ကြီးကနေ အနီးစခန်းရောက်တဲ့ထိ ရင်တစ်မမသာနေကြပေတော့ပဲ၊ သူတို့က အင်ဂျင်တုန်းကြီးတွေ ဖင်ထဲညှပ်ထားပေမယ့် မေမြို့သားတွေကတော့ ဂျောက်ဂျက်၊ ဂျောက်ဂျက်နင်းရင်း ပြန်လမ်းတစ်လျှောက်ကနေ ဆီးလို့ကြိုဆိုနေတတ်ကြလို့ပါ။
ပြောလိုရင်းက ဒါပါပဲကွယ်.. ကိုယ်တို့ ခေတ်အခါတုန်းကများပါ။
(သူငယ်ချင်းများဆီမှ ပြောဆိုခဲ့သည်များကို ပြန်လည်မျှဝေခြင်းသာ)
မန်းသားတွေကို ပါ ရန်စတာလားးး ??
ကျနော် တွေ့ဖူးတဲ့ မေမြို့သားတွေ ကျတော့ အင်မတန်ယဉ်ကျေးပြီး သဘောကောင်းလွန်းတယ်ဗျ။
စိတ်ထား နူးညံ့ပြီး ဘရုတ် မကျဘူးပေါ့ဗျာ။
ခရစ္စတိုဖာ က မေမြို့သားလားးး၊ ချစ်သူများနေ့ အခွေတွေမှာ ဆိုဖူးတယ်နော်။
တစ်ခွေလားထွက်ပြီး ခု မတွေ့ရတော့ဘူးး..
ကျွန်တော်သိထားတာ ခရစ္စတိုဖာမိသားစုအိမ်က မေခလမ်းထဲမှာပါ၊ သူက မေမြို့သား စစ်မစစ်မသိပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မေမြို့သားတွေ တော်တော်များများလဲ သူဘာကောင်လဲ မသိလို့ပါ။ ကျွန်တော်သိခဲ့တာကို ပြန်လည်မျှဝေတာပါ။
မန်းသားတွေကို ရန်မစပါဘူး။ ရန်စခဲ့ဖူးတဲ့ မန်းသားတစ်ချို့တစ်လေအကြောင်းနဲ့ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက မေမြို့သားတစ်ယောက်ရဲ့ အဝေးသင်လာတက်ရင် ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ Role လေးအကြောင်းပါ။
၇၃၊ ပျဉ်းမနား၊ UDE ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ရေးပါဦးမယ်
ပြန်လာမှ တွေ့မယ် :s:
မင့်နှယ်.. အဲ့ဒီတုန်းက နှပ်ချေးတောင် စင်ပါဦးမလားပဲ.. မေးကြည့်ပါဦး။ ဥူ းပေါက်တစ်ခုခုတော့ ပြောလာပါ့မယ်.. သူက အဲ့ဒီတုန်းက လူကြီးဖြစ်နေပြီ.. ခက်တာ အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက လူငယ် ရွာထဲမှာ မရှိ
အဲ့ခေတ်က မန်းသား ရွာထဲမှာ ရှိမရှိ မသိပေမယ့် ဒီ မေမြို့သားကြီး ရှိတယ်လေ…..
ဒီလောက်လေးနဲ့ ရပ်မထားနဲ့ဦးဗျာ.. ထပ်ရေးဦး…
အဲ့တာ ကျော်တို့ နောင်တော်ကြီး.( နာမည်တပ် ရေးခံရတော့လဲ ဂုဏ်ယူမဆုံး….ငါကွ..ဆောရိုး…) . ဟုတ်ပါတယ်..ယောက်ျားပီသပြီး ..သတ္တိရှိတဲ့ .ကိုစိုင်းကဲ့သို့သော.မေမြို့သားနောင်တော်ကြီးများရဲ့ ဩဇာ.ရေးဟန်..အပြောအဆို..အနည်းအများ လွှမ်းမိုးနေမည်ကို.. ဒီနေရာမှ ဝန်ခံလိုပါသည်ခင်ဗျာ။ ခေါင်းလောင်းဘောင်းဘီ..ဆံပင်ရှည်ကို စည်းထားတဲ့ ..နောင်တော်များကို အားကျခဲ့သည့် အချိန်က …ဆောရိုးတို့ နှပ်ချေးတွဲလောင်းဘဝ သာ ရှိသေးပါကြောင်း ။
..မေမြို့သား ဂျူနီယာ ဆောရိုး …
ဂလိုရှိတယ်ညီရ… ကိုယ်တို့တုန်းက မေမြို့သားဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူပုံနဲ့ ညီတို့လက်ထက် ဂုဏ်ယူပုံကွာတယ်ကွ.. ပြောရရင် ကိုယ်တို့လက်ထက်က အဲ့ဒါတွေကိုဂုဏ်ယူတာမဟုတ်ဘူူး.. ပြောရရင် အဲ့ဒီထဲမှာ ကိုယ်လဲ မပါဖူးဘူး.. ဒါပေမယ့် မေမြို့သားဆိုတာ ဒီလိုသွေးစည်းညီညွတ်ကြပါလား ဂုဏ်ယူတာ
ပြောရရင်ကွာ.. အဲ့ဒီခေတ်အခါတုန်းက မန်းသူ/သားဆိုတာ မြို့ကြီးသူ/သားတွေပေါ့.. စူပါကပ်ဆိုတာ ၁၂ သိန်း၊ ဒိုဆိုတာ ၂၅ သိန်း၊ အဲ့လိုကွာတယ်။ ကိုယ်တို့မြို့သားတွေ အခြေခံလစာက ၃၀၀ဝ ပေါ့။ ဒိုဆိုတာ တစ်မြို့လုံးစီးနိုင်သူ လက်ချိုးရေ လက်တစ်ဖက်မပြည့်ဘူး။ အဲ့လိုအချိန်မှာ ကိုယ်တို့ မြို့မှာ မီးပွိုင့်စုစုပေါင်း နှစ်ခုကြီးများတောင်ရှိတယ်။ တစ်ခုက နာရီစင်မှာ၊ တစ်ခုက ရကက ၃ ထိပ်၊ လားရှိုးလမ်းနဲ့ ထ ၁ သွားတဲ့လမ်း၊ ခုများတော့ ပင်စည် TEA ဆိုင်သွားတဲ့လမ်းပေါ့၊ နှစ်ခုကြီးများတောင် ဂုဏ်ယူစရာရှိတယ်။
ဆိုတော့ မြို့မှာ အခမ်းအနားရှိမှ မော်တော်ချိုချဉ်တွေ တွေ့ရတယ်ပေါ့။ ကိုယ် မေမြို့ကို စွန့်ခွာလာတာ ၂၀၀ဝ ခုနှစ်၊ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်တို့မြို့က ရှားရှားပါးပါး မော်တော်ချိုချဉ်ကို အဲ့ဒီဒုတိကပွိုင့်မှာ မန်းသားဒိုဖင်ခွတစ်ယောက်က အနားက သမ TEA ဆိုင်ထဲထိ လိုက်တိုက်တယ်ကြားရလို့ ကိုယ်တို့မြို့သားတွေ ဝိုင်းပုံစံကြွေးလိုက်တာ ကြားမိတယ်ပေါ့လေ..
၇၃ လမ်း၊ ပျဉ်းမနားနဲ့ ရတနာပုံ လို့ အကြမ်းပေးထားတာမှာ အပြည့်အစုံပြောမယ်
နုထွားမလေးက ခု သမီးလေးအမေ
ဒီပဲပုပ်ကြီးက ခုထိ လူလုပ်ပြီး လူမဖြစ်တဲ့ဘဝ
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ..နောက်နောင်များ ကျွန်တော်ရေးမှား ဆိုမှား ပြောမှားရှိခဲ့ရင်..ညီအငယ်ဆုံးလိုသဘောထားပြီး
ကိုစိုင်းအနေနှင့်ထောက်ပြ ပြင်ဆင်ပေးစေလိုကြောင်း …
ရန်ကုန်ကိုပြန်များရောက်လာဖြစ်ခဲ့ရင် အသိပေးစေလိုကြောင်း ..
မေမြို.သားဆိုလို.ကတော့ ဆိုးတူကောင်းဖက်တွေပါဗျာ… မန်းလေးသားနဲ.မေမြို.သား ချသာချနေကြတာ တည့်နေလို.ကတော့ မေမြို. ဇောက်ထိုးဖြစ်ပြီသာမှတ်… ဟေ့ဟေ့..
ကျုပ်လဲ ငယ်ငယ်တုန်းက မေမြို.မှာကျောင်းတက်တာပဲ…… ပျော်စရာတော့ကောင်းသားဗျ….
မေမြို.သားနဲ.မန်းလေးသား ချလိုက်ရင် သူတို.ပဲ….. ချစ်လိုက်ရင်လဲ သူတို.ရေပက်မဝင်ဘူး… ဟဟဟဟဟ
ကျုပ်သူငယ်ချင်းမေမြို.သားတစ်ယောက်ဆို အိမ်က ပိုက်ဆံတွေ ခိုးခိုးလာပြီး မန်းလေးဆင်းသောင်းကျန်း… ပြန်စရာ မရှိရင် မေမြို.လိုက်ပို…. ပို.ပြီးမပြန်သေးဘူး အဲဒီမှာ ထပ်သောင်းကျန်း…
မန်းလေးမှာ ကျောင်းတက်တုန်းကဆို….. ၂၁မိုင် လက်ဖက်ရည်တက်တက်သောက်သေး…. ဆိုင်က နုထွားမလေးတွေကလဲ လန်းဒါကိုးဗျ…. ဟေ့ဟေ့..
မေမြို.က နုထွားမလေးဒွေ ၊ ဂေါ်ဒခါးမလေးဒွေ၊ ရှမ်းနုထွားကြီးဒွေ သတိရထာအေ…. ဟို ဘယ်ညာမောင်းနေတဲ့ သူတွေတော့အမြင်ကပ်ပ…..
အမှန်အတိုင်းလေးပေါ့.. အဲ့ဒီခေတ်အခါတုန်းက လူငယ်တွေအချင်းချင်းပေါ့.. ဝန်ခံကြည့်ကြရအောင်.. မေမြို့သားနဲ့ မန်းသားချလိုက်ရင် သူတို့ပဲဆိုတာ သူတို့ကပဲ ဆော်လိုက်တာလား၊ သူတို့ကပဲ ခံလိုက်ရတာလား? ဒါက မေးခွန်း နံပါတ် (၁)
ကျုပ်သူငယ်ချင်းမေမြို.သားတစ်ယောက်ဆို အိမ်က ပိုက်ဆံတွေ ခိုးခိုးလာပြီး မန်းလေးဆင်းသောင်းကျန်း…
ဆိုတော့ အဲ့ဒီတုန်းက မေမြို့သားတော်တော်များများ မန်းလေးဆင်းသောင်းကျန်းတာထက် မေမြို့က ဂိုဒါးရ် နဲ့ ရဲ အောင်မှာတင် အတော်သောင်းကျန်းလို့ရတယ်၊ ဒီ့ထက်ပိုလန်းချင်ရင် လားရှိူ းကို ဒိုးကြတယ်ဗျ.. အဲ့ဒီမှာ သျှမ်းစကားပြော တရုတ်မလေးတွေ အလျှံပါယ်ပဲ.. ဂလိုရှိတယ်
၂၁ မိုင်မှာတော့ ပြောတာမှန်ပါတယ်.. လွဲနေတာလေးတွေ သမိုင်းအမှန်ထင်မှာပဲ စိုးရိမ်တာပါ
စကားမစပ် ၂၁ မိုင်က လူထုမေတ္တာဆိုင်ဆိုတာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးပါ။ နာမည်က မှတ်ရလွယ်ပါတယ်.. အောင်သူ လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘယ်ကားမှတော့မရပ်ပါ။
မေမြို.သားတွေက ဆော်တာခင်ဗျ… ဟဟဟ အေးပေါ့လေ… ဆင်းစရာဒီတစ်လမ်းရှိတာ စောင့်ဆော်လို.ရတာကိုးဗျ…. ကျုပ်ဖြင့် တစ်ခါမှ မဖြစ်ဘူးပေါင် ပြသနာ…
မန်းလေးဆင်းသောင်းကျန်းတဲ့ သူတွေ လဲရှိပဗျာ….. ကိုရင်က အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြိုက်လို.နေမှာပါ…
ကျုပ်သူငယ်ချင်းက ကတော့ မန်းလေးဆင်းဆင်းလာတာဗျ… ဒါအမှန်ပဲလေ…
ကျွန်တော်ပြောတာမှာ ကိုတိုက်မေမြို့နေဖူးတယ်ဆိုလို့ မြုပ်ကွက်လေး ထည့်ထားတာ
မေမြို့က ပြန်ဆင်းချင်ရင် ကျောက်တောင်ထိ ပြန်ဆင်းစရာ (၃)လမ်းရှိသဗျ.. ပါးပါးနပ်နပ်သမားတွေက အဲ့ဒီလမ်းတွေကဆင်းတယ်.. မိန်းလမ်းကမဆင်းဘူး.. ဘုမသိ၊ ဘမသိတွေတာ ကြိုဆိုနေမယ့်လမ်းက တန်းတန်းကြီးပြန်တာဗျ..
အေးဗျာ အဲဒီလမ်းတွေတော့သိပါတယ်ဗျာ… ကျုပ်တို. ပြေးခဲ့ရတဲ့လမ်းတွေပေါ့…
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဆရာ… ကျောက်တောင်ကျော်ရင် ကော်ဖီခြံလမ်းက တစ်လမ်းထဲပဲလေ…
အခု စစ်တက္ကသိုလ်စာပေစိစစ်ရေးဘက်ကနေ လဲ ဖြတ်ထွက်လို.ရတဲ့ဟာမလား…
အဲဒါအပြင် အခု ကန်တော်ကြီး ပတ်လမ်း ကနေ ရွာတွေထဲက ဖြတ်ထွက်တဲ့လမ်းရောသိလား….. ကားသွားလို.မရဘူး.. ဆိုင်ကယ်နဲ.ပဲ ပြန်ထွက်လို.ရတာ.. ဒါဆို ဓာတ်တော်ချိုင့်အထိသွားလို.ရတယ်လေ… ကဲ…. ဟုတ်သလားဗျာ….
ကိုရှုံးရေ ဝင်ဖတ်ပြီး သဘောတွေကျသွားပါတယ်ဗျာ…
ရေးကြပါ မောင်မောင်စောရိုးလဲ အဆက်လေးတွေရောပေါ့ …
​မေမြို့မှာ​မွေး… ​ရွှေဘိုမှာကြီး .. မန်​း​လေးမှာ​နေတယ်​
မေမြို့မိုး အစိုးမရတော့ဘီ ဪ မေမြို့မိုး မေမြို့မိုး………….. ကိုထီးသီချင်းလေးငြီးရင် မေမြို့ကို လွမ်းသွားတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မေမြို့ကတော့ အပန်းဖြေလို့ ကောင်းတဲ့နေရာပါဘဲ။
ဘယ်ဒေသ သားဖြစ်ပါစေ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေနေရင် ကောင်းပါ၏။
အကုန် ဇ တွေနဲ့ ချည်းပဲဗျာ….
မြစာကလေး (23122011) says:
ပုံက မင်းသားလား၊ လူကြမ်းလား။ ;-)